Friday Release | Filmy Bazar in Nepal
Category Archives: Friday Release
फिल्मीबजार,३० पौष २०७४,काठमाण्डौ । यो साताको फ्राईडे रिलिजमा दुई चलचित्र प्रदर्सनमा आएका छन् । ति हुन् ‘मिष्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’ ।राम बाबु गुरुङ निर्देशित ‘मिष्टर झोले’मा दयाहाङ राइ, दिया पुन, वर्षा राउत, लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।यस्तै ओम प्रतिक गुरुङको निर्देशनमा बनेको फिल्म बटरफ्लाईमा प्रियंका कार्की र आर्यन अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्मको रोमान्स रहेको गीत ...	Read More »
फिल्मीबजार, २२ मंसिर २०७४,काठमाण्डौ । शुक्रबार अर्थात मंसिर २२ बाट नेपाली कथानक चलचित्र ‘दिपज्योति’ प्रदर्शनमा आएको छ । नारायण मैनाली निर्देशित यस फिल्म देशभर झण्डै ५ दर्जन सिनेमा घरमा प्रदर्शन भईरहेको छ । तर,चुनाबी रौनकका कारण ब्यापारिक रुपमा भने धेरै नै कमजोर देखिएको छ । यस चलचित्रमा प्रमोद दिप, रजनी केसी, पुष्कर रेग्मी, खुश्वु खड्का, निर शाह, सरोज खनाल लगायतका ...	Read More »
फिल्मीबजार, ९ कार्तिक २०७४,काठमाण्डौ । शुक्रबार मात्रै नयाँ फिल्म रिलिज हुन पाउने प्राबधान रहेता पनि पछिल्ला केहि बर्ष देखी चाडबाडलाई केन्द्रित गर्दै बिहिबारै नयाँ फिल्म रिलिज हुने गरेका छन् ।बिहिबार फिल्म रिलिज गर्नलाई कतिले ठुलै पाबर समेत लगाउने गरेका छन् । यसै पालिको बिहिबार पनि छठको मौका छोप्दै चलचित्र ‘ऐश्वर्य’रिलिज गरिएको छ । प्राय:जसो दशै तिहार र तिजमा बिहिबार नै ...	Read More »
फिल्मीबजार, १७ भाद्र २०७४,काठमाण्डौ । यो साताको फ्राईडे रिलिजमा झरना थापा निर्देशित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर’ सार्बजनिक प्रदर्शनमा आएको छ ।झरना थापाको डेब्यु निर्देशिन रहेको उक्त फिल्मलाई सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा नयाँ अनुहार सलिनमान बानियाँ, साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह, सलोन बस्नेत लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ‘ए मेरो हजुर’ जहाँ अन्त्य भएको थियो, त्यहीबाट चलचित्र सुरु ...	Read More »
फ्राईडे रिलिजमा ‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’
फिल्मीबजार, ३ भाद्र २०७४,काठमाण्डौ । यो साताको फ्राईडे रिलिजमा चलचित्र ‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’ सार्बजनिक प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्मले मल्टिप्लेक्स तथा सिंगल स्कृन दुबैतिरको टार्गेट राखेको छ ।मल्टिप्लेक्स तर्फ राजधानीमा क्युएफएक्सले ‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’लाई १३ शो दिएको छ भने बिग सिनेमाले ५ शो दिएको छ । दुबैतर्फ शनिबारको लागी बिहानी तथा दिवा शो का अधिकांश पर्दा अनलाईन बुकिङले हाउसफुल नजिक छन् । ...	Read More »
फिल्म ‘रुद्र’को प्रिमियर
फिल्मीबजार, १२ साउन २०७४, काठमाडाै काठमाडाैकाे बालाजुस्थित विजी मलमा फिल्म ‘रुद्र’को प्रिमियर गरिएकाे छ । उपस्थितीका लागि २ बजे निमन्त्रणा दिइएको भएतापनि साढे ४ बजे सुरु गरिएकाे थियाे । रमेश उप्रेती, आकाश अधिकारी, सञ्चिता लुईटेल लगायतका चलचित्रकर्मीदेखि पत्रकारहरुको प्रिमियरमा बाक्लो उपस्थिती थियो । अभिनेता निखिल उप्रेतीले निर्माण गरेको फिल्म ‘रुद्र’को प्रिमियर काठमाण्डौमा सम्पन्न भएपछि उपस्थिती सबैले चलचित्र राम्राे बनेकाे बताए ...	Read More »
फ्रार्इडे रिलिज ‘म यस्तो गीत गाउँछु’
फिल्मीबजार, ३० असार २०७४, काठमाडाै अाज शुक्रवारबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आएकाे आशा लाग्दो चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को बुधवार राजधानीको कुमारी हलमा भब्य प्रिमियर शोको आयोजना गरिएको थियो । चलचित्रकर्मी,पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको प्रिमियरमा चलचित्रका नायक पल शाह, नायिका पूजा शर्मा, निर्देशक सुदर्शन थापासँगै संगीतकार अर्जुन पोख्रेलको पनि उपस्थित थिए । प्रिमियरमा चलचित्रलाई उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिलेको छ । सबैले ...	Read More »
फ्राईडे रिलिजमा ‘धनपति’
फिल्मीबजार, २२ असार २०७४, काठमाडाै पशुपतिप्रसादकाे सफलता पछि दीपेन्द्र के. खनालद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘धनपति’ भाेलि असार २३ गते शुक्रबारदेखि देशभर प्रर्दशनमा अाउने भएको छ । केही दिन अघि मात्रै एक कार्यक्रमकाे माझमा धनपतिकाे ट्रेलर सार्वजनिक गरिएकाे थियाे । ट्रेलरमा चलचित्र भित्रका केही अंश समेटिएको थियाे । ट्रेलर हेर्दा चलचित्र पारिवारीक विषयबस्तुमा निर्माण भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पशुपतिप्रसादको व्यवसायिक सफलतापछि टुकी ...	Read More »
फ्राईडे रिलिजमा पर्ब
फिल्मीबजार,१२ जेठ २०७४,काठमाण्डौ । यो साताको फ्राईडे रिलिजमा पछिल्लो समय ‘काले दाई काले दाई’ बोलको गीत समाबेश गरिएको चलचित्र ‘पर्ब’ देशभर प्रदर्शनमा आएको छ ।काले दाई गीतलाई युटुबमा १ करोड १ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भने, गीतले स्वदेश देखि बिदेशमा हुने प्राय ईभेन्टहरुमा स्थान पाईरहेको छ । दिनेश राउतले निर्देशन गरेको चलचित्र पर्बको ‘काले दाई काले दाई’ ...	Read More »
नयाँ बर्षमा तीन फिल्म !
फिल्मीबजार १ बैशाख काठमाण्डौ , नयाँ बर्षलाई लक्षित गर्दै तीन नेपाली फिल्म दर्शक समक्ष आएका छन् । प्रदर्शनरत फिल्महरु लभ लभ लभ , घामपानी र राधे आश गरिएका फिल्ममा नै पर्छन । तर पनि नयाँ बर्षमा हुने फिल्मको ब्यापारलाई लक्षित गर्दै यी फिल्महरु एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । आउनुस हामी पनि यिनै तीन फिल्मको बारेमा चर्चा गरौ । लभ लभ ...	Read More »